Date လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲက သုံးပုံတစ်ပုံဟာငွေမကုန်ပဲစားရလို့ဖြစ်တယ်ဟုဆို – ရှအေလငျး
အခုတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ သတင်းလေးကတော့ လေ့လာတွေ့ရှိမှုအကြောင်းလေး တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းတစ်ရပ်အရ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိမှုကတော့ Date လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးထဲက သုံးပုံတစ်ပုံက ငွေမကုန်ပဲနဲ့ မုန့်
Young pretty woman eating soup, enjoying dinner while sitting at cafe. Dressed in sweater.
ဒီလို Date လုပ်တဲ့ ဓလေ့ကတော့ အနောက်တိုင်း ယာဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာလို ဆိုရင်တော့ ချိန်းတွေ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအရတော့ တကယ်မကြိုက်ပဲနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချိန်းတွေ့လေ့
မရှိပေမယ့် အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ ကြိုက်မကြိုက်တဲ့ သူနဲ့ကိုယ် အကြိုက်ချင်းတူပါ့မလား ၊ ကိုယ်ကရော သူ့ကို စိတ်ဝင်စားလား စသဖြင့် လေ့လာနိုင်ဖို့ Date လုပ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ တဖြေးဖြေး အတူတွဲသွား
တာ ၊ လာတာ အပြင် အတူနေထိုင်ပြီးမှ ကလေးတွေဘာတွေရတဲ့အချိန်မှလည်း လက်ထပ်ကြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီလို Date လုပ်တာဟာ သူတို့ စိတ်ဝင်စားလို့ထက် ၃ ပုံ ၁ ပုံ သော အမျိုးသမီးတွေဟာ မုန့်အလကား စားရလို့ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တမ်းက ဖော်ပြနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ စစ်တမ်းရဲ့ ရလဒ်ကိုတော့ အမျိုးသမီးထုက ကျေနပ်ကြမှာ
မဟုတ်သလို ၊ အမျိုးသားထုကြီးအနေနဲ့လည်း မှန်ကန် မှုရှိရဲ့လား ဆိုတာကို မိမိတို့ အမြင်လေးကို ဝေဖန်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
အခုတဈခါ တငျဆကျပေးခငျြတဲ့ သတငျးလေးကတော့ လလေ့ာတှရှေိ့မှုအကွောငျးလေး တဈရပျပဲ ဖွဈပါတယျ။ စဈတမျးတဈရပျအရ ဒီလလေ့ာတှရှေိ့မှုကတော့ Date လုပျတဲ့ အမြိုးသမီးထဲက သုံးပုံတဈပုံက ငှမေကုနျပဲနဲ့ မုနျ့
ဒီလို Date လုပျတဲ့ ဓလကေ့တော့ အနောကျတိုငျး ယာဉျကြေးမှု တဈရပျဖွဈပွီးတော့ မွနျမာလို ဆိုရငျတော့ ခြိနျးတှတေ့ာ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာယဉျကြေးမှုအရတော့ တကယျမကွိုကျပဲနဲ့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ခြိနျးတှလေ့ေ့
မရှိပမေယျ့ အနောကျတိုငျးယဉျကြေးမှုမှာတော့ ကွိုကျမကွိုကျတဲ့ သူနဲ့ကိုယျ အကွိုကျခငျြးတူပါ့မလား ၊ ကိုယျကရော သူ့ကို စိတျဝငျစားလား စသဖွငျ့ လလေ့ာနိုငျဖို့ Date လုပျကွပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ တဖွေးဖွေး အတူတှဲသှား
တာ ၊ လာတာ အပွငျ အတူနထေိုငျပွီးမှ ကလေးတှဘောတှရေတဲ့အခြိနျမှလညျး လကျထပျကွတာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။
ဒီလို Date လုပျတာဟာ သူတို့ စိတျဝငျစားလို့ထကျ ၃ ပုံ ၁ ပုံ သော အမြိုးသမီးတှဟော မုနျ့အလကား စားရလို့ ဖွဈတယျလို့ စဈတမျးက ဖျောပွနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီ စဈတမျးရဲ့ ရလဒျကိုတော့ အမြိုးသမီးထုက ကနြေပျကွမှာ
မဟုတျသလို ၊ အမြိုးသားထုကွီးအနနေဲ့လညျး မှနျကနျ မှုရှိရဲ့လား ဆိုတာကို မိမိတို့ အမွငျလေးကို ဝဖေနျပေးခဲ့ပါဦးနျော။
နေရပ်ပြန်ရမှာမို့ လေဆိပ် ကနေ မျက်ရည်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို နှုတ်ဆက်သွားခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် မော်ဒယ်Sinon Loresca
ဆေးရုံ မှာ မသေသင့်ဘဲ သေခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး နှင်းရတီထွန်း ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ရာ နောက်ဆုံးခရီး
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သေမိန့်ချခံထားရတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို ဘယ်လို သေဒဏ်ပေးသလဲ ဆိုတာ
အချစ်ရေးကို …လက်ထက်ဖြစ်မှ …ချပြတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့...
မိတ်ဆွေများတွက်… နောင်တ မရစေဖုိ့ ခုပဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ 🥰🥰
မန္တလေး NIMI Drink japan ဆိုင်ကို …မျက်နှာဖုံးစွပ်လူ (၆)ဦးက…...